မင်းရဲ့နည်းလမ်းနဲ့ Descartes အတွက် သံသယစိတ်တွေကို ငြင်းပယ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်များ - Rabbi Michael Avraham
မင်းရဲ့နည်းလမ်းနဲ့ Descartes အတွက် သံသယတွေကို ငြင်းပယ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်များ
တုံ့ပြန်မှု > အမျိုးအစား- အထွေထွေ > မင်းရဲ့နည်းလမ်းနဲ့ Descartes အတွက် သံသယတွေကို ငြင်းပယ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်များ
ဆင်ခြင်တုံတရား လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က မေးတယ်။
Repentants ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်း မေးချင်ပါတယ်၊
Kant ၏ လူသိများသောမေးခွန်းတစ်ခုတွင် အကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ကမ္ဘာကြီးအကြား ဆက်နွှယ်မှုမရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းသည် ရိုးရှင်းပုံရသည်၊ ထို့နောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်သည် ကမ္ဘာကြီးနှင့် လူသားကြားတွင် ဆက်နွှယ်မှုရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ယုံကြည်နိုင်သနည်းဆိုသည့် မေးခွန်းပေါ်လာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မေးခွန်းများ၏ နောက်ပြန်ဆုတ်ခြင်းကို အမြဲကြုံတွေ့နေရသောကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ သက်သေပြရန် မဖြစ်နိုင်သော်လည်း အခြေခံယူဆချက်များသည် သက်သေမပြသင့်ဘဲ အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်ဟူသော ယူဆချက်ကို သံသယမရှိသူများသည် လက်ခံသည်ဟု ထင်ရသည်။ axiom။
ဒီတော့ ကျွန်တော် မေးချင်တာက၊ အကြောင်းပြချက် မရှိတဲ့အရာဟာ သံသယဖြစ်စရာ၊ သူ့ဟာသူ ယူဆချက်တစ်ခုလို့ ပြောင်းပြန်ယူဆချက်လား?
သို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံယူဆချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာစွာ ယူဆရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ရဗ္ဗိသည် ဤအရာကို လက်မခံသော်လည်း သေချာမှုအား ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုဖြင့် အစားထိုးသည်၊ သို့သော် ယင်းသည် ဇာတ်လမ်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နေပေသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဖြစ်နိုင်ခြေသည် သံသယရှိသော တောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံသည်ဟု ယူဆသည် ။
ဒါ့ပြင်၊ သူ့အဆိုအရ အလုံးစုံနားလည်ပုံမပေါ်တဲ့ Descartes နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကို ကျွန်တော် တစ်ခါတည်း ပေါ်လာခဲ့ပြီး၊ ဗေဒင်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားတွေနဲ့ ဘုရားသခင်က ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားရာမှာ တော်တယ်ဆိုပေမဲ့ အဲဒါကို ဘယ်လို ယူဆခဲ့တာလဲ။ ရည်မှန်းချက်လား
မီကင်း ဝန်ထမ်း လွန်ခဲ့သော2နှစ်ကဖြေဆိုခဲ့သည်။
မေးခွန်းကို ကျွန်တော် သေချာနားမလည်ဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားအပေါ် ငါနည်းနည်း မှတ်ချက်ပေးမယ်။
Kant သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခံယူချက်နှင့် ကမ္ဘာကြီးအကြား ဆက်စပ်မှုမရှိဟု မပြောပါ။ ဆက်နွှယ်မှုတစ်ခုကျိန်းသေရှိပါတယ်, နှင့်ပိုပြီးမည်သို့။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်နေရသော ပုံရိပ်သည် သတိရှိသောအရာဟုသာ အခိုင်အမာဆိုသည်။ ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်က ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတစ်ခုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိစိတ်တွင် အလင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ သူတို့ကြားက ဆက်စပ်မှုမရှိဘူးလား။ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ အလင်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း၏ အမြင်အာရုံကို ကိုယ်စားပြုသည်။
Kant မှာ မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါတို့ရနိုင်သမျှအရာအားလုံးဟာ နိမိတ်ပုံ (သိမြင်မှု) သာဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ခုဟာ သူ့အလိုလိုရှိနေတယ်ဆိုတာ သူတောင်သိနေတော့တယ်။ ဒါက ဝီရိယရဲ့ နိယာမရဲ့ ရလဒ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဤနိယာမအားဖြင့် သတိတရားရှိလျှင် လောက၌ ဖြစ်ပေါ်သော တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းတရား ရှိသင့်သည်ဟူ၍ မိန့်တော်မူ၏။
အကြောင်းပြချက်မရှိသော မေးခွန်းကို နားမလည်ခဲ့ပါ။ အကြောင်းပြချက်မရှိ မေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားသလား။ နိယာမအရတော့ ဟုတ်နိုင်ပေမယ့် အကြောင်းတရားရဲ့နိယာမကတော့ မယူဆပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကွမ်တမ်သီအိုရီတွင် အကြောင်းတရားနှင့် အကျိုးတရားတို့၏ ဆက်စပ်မှုသည် ကွဲပြားပြီး သာမန်သဘော၌ပင် အမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်းမရှိပေ။
သစ္စာတရားနဲ့ သေချာရောနှောနေသလား။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ ဘာမှမသေချာဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တာက ဆွေးနွေးချက်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။
ဝိစိကိစ္ဆာသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုကို ဆန့်ကျင်သည်။ သင်ပြောသောစကားမှ ထွက်ပေါ်လာသကဲ့သို့ သေချာမှုသာလျှင် အမှန်တရားကိုပေးသည်ဟု သံသယရှိသူက ထင်သည်။ ဒါပေမယ့် မင်းအဲဒါကို မှားနေတယ်။
ဆင်ခြင်တုံတရား လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
နားမလည်တဲ့ အပိုင်းတွေကို ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
2. ဒီအချက်ကိုလည်း ကျွန်တော် မေးဖူးပါတယ်။ ယုံမှားသံသယမရှိသူတိုင်းသည် လောကနှင့် ဖြစ်စဉ်ကြားတွင် ဆက်စပ်မှုရှိရမည် (Doge 1 တွင် မျက်လုံးနှင့်အလင်းကိုဆိုပါစို့)၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိဉာဏ်သည် ဦးစားပေးနိယာမတစ်ခုပေါ်တွင်သာ တည်နေပါက၊ Descartes Is သည် ဤကျယ်ပြန့်သော အသိတရားအောက်တွင် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်၊ ဒါပေမယ့် အများစုက မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းပြချက်လို့ မထင်ကြဘူး။ သို့ဆိုလျှင်၊ အကြောင်းတရား၏ နိယာမသည် တစ်ခုတည်းနှင့် မလုံလောက်ဟု ထင်ရသော်လည်း ၎င်းသည် နောက်ခံတွင် ရှိနေပုံရသော်လည်း နောက်ထပ်အရာတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
3. ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်း၊ အဖြစ်အပျက်များ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သည့်မေးခွန်းကို ကျွန်ုပ်မဆိုလိုပါ၊ သို့သော် အဓိကအားဖြင့် ယူဆချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များအကြောင်း၊ ဥပမာ ယူဆချက်၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ အကြောင်းပြချက်မရှိဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာဖြင့်သာ ဘုရားသခင်သည် လောက၌ အကြောင်းတရားများ ၏ကျောက်ဆူးဖြစ်သည်ဟူသော ခံယူချက်မျိုးဖြင့် တစ်စုံတစ်ခုကို ယုံကြည်နိုင်မည်ဟု ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူဆချက်တွေကို သံသယမ၀င်ဘူးဆိုရင် တစ်စုံတစ်ခုဟာ မသေချာပေမယ့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိတဲ့ အတိုင်းအတာရှိတယ်လို့ ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲ။ အမှန်မှာ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ယူဆချက်မှန်သမျှကို မေးခွန်းထုတ်နိုင်သည်ဟု နောက်ကွယ်တွင် ယူဆသည်။
3. အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သူ၏နည်းလမ်းကို သံသယရှိသူသည် ယူဆချက်များအား ယုံမှားသံသယရှိရန် ဆန္ဒရှိသော်လည်း အကယ်၍ ယူဆချက်များအား မေးခွန်းထုတ်သင့်သည် သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ မည်သည့်အရာကမျှ မှားယွင်းသည်ဟု ယူဆချက်ကိုလည်း သံသယဝင်နိုင်သည်။ သို့ဆိုလျှင် သူ့အကိုင်းအခက်ကို ခုတ်လှဲနေပုံရသည်။ မရှိဘူးလား?
5/4 ငါဆိုလိုသည်မှာ3Risha ဖြစ်သည်။
3. ကျွန်ုပ်နားမလည်သောနည်းဖြင့် "အကြောင်းရင်း" ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို သင်အသုံးပြုသည်။ အရသာ/ဆင်ခြင်တုံတရားကို ဆိုလိုတာလား။
အမှန်တကယ်တော့ အကြောင်းပြချက်အတွက် အခြေခံမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယူဆချက်တွေကို သံသယမ၀င်တာတော့ မမှန်ပါဘူး။ မည်သည့်တောင်းဆိုမှု၊ ယူဆချက် သို့မဟုတ် နိဂုံးချုပ်သည်မျှ ကျွန်ုပ်အတွက် သေချာပါသည်။
အမှန်ကတော့ ငါဆိုလိုတာက အကြောင်းပြချက်/အရသာ။
ပထမအချက်၊ ၂ နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအရာသည် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသဘောတူပါသလား။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရုပ်လောက၏လက်ခံမှုဆီသို့ * တစ်ဦးတည်း * ပေါင်းကူးနိုင်စေမည့် မည်သည့်ဦးစားပေးမူအတွက်မဆို လုံလောက်ပုံမပေါ်ပါ။
သို့ဆိုလျှင် သင်သည် ခိုင်မာသောအချက်ကို မည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။ ဒါက ငါ့အတွက် သိပ်မရှင်းဘူး။
ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သင်ပြောလျှင်ပင်၊ ၎င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဘယ်အရာသည် မသေချာနိုင်မည်နည်း။ အခြားအယူခံဝင်မှု သို့မဟုတ် အခြားသံသယနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တူညီသော သံသယ သည် နောက်ထပ် အခြေခံ ရှင်းပြချက် တစ်ခု ရှိ သည် နှင့် သူ ၊ သို့မဟုတ် ပထမ အနေဖြင့် ၊ အရင်းခံ ရှင်းပြချက် စနစ် သည် axiomatic ဖြစ် သည် ဟု ယူဆ နိုင် သည် ။ ဒါပေမယ့် ရိုးရှင်းစွာဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ယူဆချက်မှာ ပကတိတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း ပို၍အခြေခံကျသောအရာမှ နိဂုံးချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်သံသယကင်းကင်းနဲ့ ယူဆချက်တွေကို မေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေက ပုံထဲကို ဘယ်ရောက်သွားမလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့အတွက် အရာရာဟာ ညီတူညီမျှ ထင်သလို ဖြစ်နေလို့ပါ။ (အရာရာတိုင်းသည် မတရားဟုယူဆခြင်းသည် မတရားသည်...)
သို့ဆိုလျှင်၊ သင်သည် သံသယရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ရသရွေ့ ကျွန်ုပ်အတွက် တစ်စုံတစ်ခု ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်ဟူသော အချက်မှာလည်း ခိုင်လုံမှု မရှိပါ။ အကြောင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးသည် ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သော အဆင့်တွင်သာ ရှိသော်လည်း ၎င်းနှင့် ရည်မှန်းချက်ကမ္ဘာတို့အကြား ဆက်စပ်မှု မရှိသောကြောင့်၊ နိမိတ်ပုံအဖြစ် ဘယ်တော့မှ ပေါင်းကူးလို့မရဘူး။
ယုံမှားသံသယမရှိရင် မင်းယူဆချက်တွေကို မေးခွန်းထုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူး...
နောက်ဆုံးခုံသမာဓိ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
"ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းသည် အလင်းသို့ပြန်ဆိုသည်"
လှိုင်းသည် အာရုံကြောအချက်ပြမှုများအဖြစ် ဘာသာပြန်သည်။ အခြားတစ်ခုခုသို့ ဘာသာပြန်ခြင်း အခြားတစ်ခုခုသို့ ဘာသာပြန်ခြင်း... အဆုံးတွင် တစ်နည်းနည်းဖြင့် အလင်းရှိပါသည်။
အလင်းနှင့် လှိုင်းကြား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု မရှိပါ။ ဆက်စပ်မှုမှာ အလွန်ပင် သွယ်ဝိုက်လွန်းလှသည်။
ငါ မင်းကို လုံးဝဆုံးရှုံးသွားတယ်။ မင်းက လိင်မဟုတ်တဲ့ လိင်နဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ ရောနှောပြီး ငါဖြေခဲ့တာကို မရည်ညွှန်းဘူး။ ငါ အကုန်ဖြေပြီးပြီ။
ခုံသမာဓိ၊ အဲဒါ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုပါ။ တစ်ခုက အဆင့်များစွာဖြင့် ဖျန်ဖြေပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်လျှင်ပင် အခြားအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးခြစ်ကိုပွတ်တိုက်ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းသည့်ကြားလမ်းကို ဖြုတ်လိုက်သောအခါတွင် အလယ်အလတ်အဆင့်အချို့ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်သလဲ? တစ်ခုက နောက်တစ်မျိုးကို ဖြစ်စေတယ်။ ကြားခံအဆင့်များရှိပါက Nafam လုပ်နိုင်ပါသလား။ တန်ခိုးတော်၏ပြဿနာကို ငါတို့သည် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရသလော။
ဆုံးရှုံးမှုကို တုံ့ပြန်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
မင်းငါ့ကို ဆုံးရှုံးသွားရင် မင်းဘယ်လိုဖြေမလဲ...
ကျွန်ုပ်အတွက် မရှင်းလင်းသောအချက်မှာ ပရဝုဏ်တစ်ခု၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ၎င်းကိုအခြေခံရန် အကြောင်းမရှိဟု ယေဘူယျသဘောတူထားသည်။
သို့သျောလညျး၊ အခြုပျအခွခေံကိုအသုံးမပြုဘဲမည်သို့မေးခွန်းထုတ်နိုင်မည်နည်း။ မင်းတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း မင်းလုပ်တယ်။
ဒီတော့ တစ်ဖက်က ယူဆချက်တွေကို မေးခွန်းထုတ်လို့ ရနိုင်တာမို့ တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်ချေ အနည်းနဲ့ အများ ဘယ်လို ယူဆနိုင်မလဲ။ ပြီးနောက်၊ သင်သည် ထိုဖြစ်နိုင်ခြေသဘောကို ထပ်လောင်းသံသယဝင်နိုင်သည်...? ထို့ကြောင့် သင်၏ကောက်ချက်သည် ဆာလ်ဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်ရန် သင့်လျော်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် သံသယဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်ကို သံသယဖြစ်မိပြီး တွယ်ကပ်နေလိမ့်မယ်။
သို့သော် အချို့သော ယူဆချက် * သေချာသည် * သည်လောက် သေးငယ်မည်ဟု တွေးခြင်း၏အစတွင် ရှိသည်ဟု ဆိုရပါမည်။
ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်သောအရာသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်ဟု ယူဆခြင်းသည် အမှန်ပင် ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည် (လုံးဝရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်သော်လည်း)။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုမှစပြီး အလုပ်သမားများ ဖြစ်နိုင်ခြေ စသည်တို့ကြောင့်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်အားလုံးသည် ၎င်းတို့တွင် သံသယစိတ်ဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာသော ရာခိုင်နှုန်းမရှိဟု ဆိုပါက၊ ၎င်းတို့နှင့် ပြင်ပရှိ သံသယဖြစ်ဖွယ်တောင်းဆိုမှုများနောက်တွင် ယင်းသံသယကို ဖြစ်ပေါ်လာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်သံသယရှိသူဖြစ်နိုင်သရွေ့ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု သင်ဘယ်သောအခါမှ မတောင်းဆိုနိုင်ပါ။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ…
ဒါကြောင့် မင်းရဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရှေးဦးအရာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း သဘောတူပြီး အရာအားလုံးဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေသက်သက် မဟုတ်ဘူးလို့ ငါပြောချင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်နိုင်ခြေက သေချာပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ငါမှန်ရင် မင်းဟာ အစွန်းရောက်ဝါဒီထက် ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒကို ပိုသဘောကျတာ တွေ့ရတာဘဲ 😉
ပြောဆိုရန် အထောက်အထားမရှိသော်လည်း၊ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
"ကျွန်ုပ်၏အသိဆုံးအနေဖြင့်၊ လူတစ်ယောက်သည် မည်သည့်နယ်ပယ်တွင်မဆို သေချာပေါက်ရောက်နိုင်ခြေမရှိပါ။" ဒီလိုသေချာတဲ့နည်းလမ်းကို သူရှာတွေ့ခဲ့ရင်တော့ သူ မှားသွားနိုင်တယ် (သေချာပါတယ် 🙂)။
ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တွေးခေါ်မှု၏ အောက်ခြေတွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု နှင့် အခြားကမ္ဘာတစ်ခုအကြား ဆက်စပ်မှုရှိနေသည်ဟု တွေးတောခြင်း၏ အောက်ခြေတွင် သေချာပြီး အခြေခံကျသော အရာတစ်ခု ရှိနေပါသည်။
ပြန်ပြောပါ၊ ငါ မင်းကို အခု ဆုံးရှုံးသွားပြီ (အခု မင်း ဘာလိုချင်လဲ) ငါ အရင်က အရာအားလုံးကို ဖြေပြီးပြီ ။
ထိုင်ခုံ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
သင့်နည်းလမ်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ အသေအချာလက်ခံမည့် တိကျသေချာသော (ကန့်သတ်ချက်များပင်) ရှိရန် လိုအပ်ပါသလား။
ပြီးတော့ ဒီအချက်က ငါတို့အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံပေါက်တာက တကယ့်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး အဲဒါနဲ့ ဆက်နွှယ်မှုရှိတယ်လို့ ငါထင်ပါတယ်။ ဤနည်းဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများသည် သံသယစိတ်ထဲသို့ မ၀င်ရောက်ဘဲ တရားမျှတပြီး တစ်ဖက်တွင် အရာအားလုံးသည် သေချာသည်ဟု မတောင်းဆိုဘဲ မျှတနိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် အမှန်ပင် “သံသယအခြေခံယူဆချက်များကို လုပ်ခဲ့သည်ဟု ဦးစွာပြောခဲ့သည်။ ငါ့အတွက် ဘာတောင်းဆိုမှု၊ ယူဆချက် ဒါမှမဟုတ် ကောက်ချက်ချတယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။"
ဒါပေမယ့် မင်းရေးခဲ့တာကို တကယ်ဆိုလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်အကြောင်းအရာက မှန်သည်ဖြစ်စေ မမှန်ကန်ကြောင်း ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိရမယ် (သင်က သံသယမ၀င်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။) ဒါပေမယ့် ဒီစွမ်းရည်ဟာ ပကတိတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သံသယဝင်ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးမှ သံသယဖြစ်မယ်။
ဒီအရာတွေက ရိုးရှင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ ပို့စ်မော်ဒန်မဟုတ်သူမဟုတ်ကြောင်း သင်နှစ်ယောက်လုံးက အလားတူကိစ္စတွေကို တောင်းဆိုတဲ့ ဒုတိယဒဿနပညာရှင်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ သိမြင်လာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်မှန်သလား ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်စကားတွေ ပြတ်သားမလား။ ပြီးတော့ ကိတ်မုန့်ကို စားပြီး လုံးထားလိုက်ပါ။
Kant အရ လူတိုင်းမေးသင့်သည့် ယူဆချက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒသည် လောကတွင် ဆက်နွှယ်မှုမရှိဟုလည်း လက်ခံသောကြောင့်၊ အခြားကိစ္စရပ်များတွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကောက်ချက်များလည်း ရှိသေးသည်... ဒါက မင်းရဲ့တောင်းဆိုချက် အတိအကျမဟုတ်ပေမယ့် အဆုံးမှာတော့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အတော်လေး ဆင်တူပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြထားပါတယ်။
ငါ တတိယအကြိမ် ဖြေဆိုသည် ။ ငါ့မျက်လုံးထဲမှာ ဘာတစ်ခုမှ မသေချာဘူး။ တစ်ဆယ့်ခုနစ်ကြိမ်မြောက်အောင် ထပ်ခါထပ်ခါ မသေချာမရေရာသော ဝိစိကိစ္ဆာမဟုတ်၊ ဝိစိကိစ္ဆာဆိုသည်မှာ အချို့သော အနေအထားသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ထက် သာလွန်ခြင်းမရှိဟု ဆိုလိုသည်။ မသေချာမရေရာသော တစ်ဖက်တွင်သာ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ် မသေချာပါ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက် လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
ပြီးတော့ ၀င်လေ့ရှိတဲ့ ဂျီဩမေတြီကော်လံတစ်ခုကော။ တစ်ခုခုတော့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သလိုပဲ။ ငါ့အမြင်မှာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အရာဟာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ ငါ့အမြင်မှာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တယ်လို့ ထင်တဲ့အရာက ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တယ်လို့ ငါ့အမြင်မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြစ်နိုင်ခြေကို 0% သေချာမှုသို့ လျှော့ချမည်ဖြစ်ပြီး တောင်းဆိုမှုတစ်ခုစီသည် 99.99% သေချာမှု၏ ကန့်သတ်ချက်သို့ ရောက်ရှိသွားပါမည်။
မေးခွန်းကနေ နားလည်တာကို ရေးတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဖြေမှာ 99.99 တွင် "ငါ့အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်" ဟုဆိုပါက၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကောင့်အားလုံး၏နောက်တွင် 99.99 ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက် တောင်းဆိုခြင်းမဟုတ်ပေ။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုနှင့် သေချာမှုတို့ကြား ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကို သေချာစွာဆုံးဖြတ်ပါ။
လုံးဝနားမလည်ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
မသေချာသော်လည်း ယုံမှားခြင်းသို့ မပို့ဆောင်ဘဲ အံ့ဖွယ်အမှုကို မည်သို့ဖန်တီးသနည်း။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မသေချာမရေရာမှုနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်တစ်ခုလုံးသည် ဒုတိယရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်ဟု ယူဆသော်လည်း သင့်မှာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိမရှိကို အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိမရှိကို သင်မေးမည့်အခြားယူဆချက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအံ့ဖွယ်အံ့သြဖွယ်မှာ 90% ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနှင့် 50% သံသယ (အရေအတွက်ကို တိုင်းတာရန် တောင်းဆိုပါက) ကွာခြားချက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဒါက တကယ်ကို အံ့သြစရာကောင်းပြီး နားမလည်နိုင်ပေမယ့်လည်း ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ အကြိမ်ပေါင်း ခြောက်သန်းလောက် လှိမ့်လိုက်တယ်။ ရလဒ်ကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်ပြီး ဆံပင်တုတစ်ခုလျှင် ရလဒ် တစ်သန်းခန့် ရှိမည်ဟု လောင်းကြေးထပ်ထားသည်။ ငါသံသယရှိတယ် (ဒါဟာ 100%) မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒါက ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အံ့မခန်း။
ပြီးတော့ ပင်ကိုယ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်း အလိုလို အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းလည်း ရှိတယ်။ ဤအလှည့်အပြောင်းသည် ခပ်မိုက်မိုက်ပင်။ မင်းမှန်တယ် မင်းဘယ်လိုသိလဲ မေးတာနဲ့တူတယ် မင်းမှန်တယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့သူ။ ၎င်းသည် သာမန်အယုံအကြည်မရှိသော အငြင်းအခုံနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
သွေးထွက်သံယိုတွေအထိ ဒီပဟေဠိတွေကို ငါတို့ တကယ် ကုန်ဆုံးသွားပြီ။
ဤအရာနှင့် သာမန်အယုံအကြည်မရှိသော အငြင်းအခုံတစ်ခုကြား ဆက်စပ်မှုကား အဘယ်နည်း။ ဤနေရာတွင် "မင်းဘယ်လိုသိလဲ" မမေးဘဲ သူပြောသမျှကို လက်ခံပြီး သူ့နည်းလမ်းကိုသာ ဆွေးနွေးသည်။ တစ်ခုခုမှန်တယ်လို့ ရာနှုန်းပြည့်သေချာတယ်လို့ပြောရင် တစ်ခုခုမှန်တယ်လို့ ရာနှုန်းပြည့်သေချာတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုမှန်တယ်လို့ ရာနှုန်းပြည့်သေချာပါတယ်- အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် တစ်စုံတစ်ခု၏ လက်ဝယ်တွင် ရှိနေလိမ့်မည်။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်ခြေမျှသာရှိလျှင် ထပ်ခါတလဲလဲ စက်ဝိုင်းသည် သုညသို့ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤအရာကိုဖြေဆိုနည်းကိုသိသောသင်မှလွဲ၍ ဤနေရာတွင် site ပေါ်တွင်မည်သူမျှမရှိဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သင့်တွင် ထက်မြက်သော အဖြေတစ်ခုရှိလျှင်ပင် ဤနေရာတွင် ၎င်းကို စာတွဲထဲတွင် ရှာမတွေ့ပါ။ ထင်ရှားသည်မှာ SAG သည် အပြစ်ရှိပြီး တုံ့ပြန်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုကြားသို့ ပြောင်းသွားပုံရသည်။
အရင်ကတည်းက နားလည်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
တကယ်ပါပဲ။ အဆုံးတွင် ပင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းသည် ပင်ကိုယ်အတွင်း၌ မသေချာမရေရာသော ဖြစ်နိုင်ခြေကို ထည့်သွင်းထားသော်လည်း * သေချာမှု * တွင် လက်ခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း အဆုံးတွင် ပင်ကိုယ်အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းကြောင်း ကျွန်ုပ်သဘောတူပါသည်။ ပြင်ပပံ့ပိုးပေးသူ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦး * ပြည်တွင်းရေး * သံသယ, ဤဝုဏ်၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, ဤနေရာတွင်သေချာဘို့အချို့သောဒြပ်စင်ရှိ၏အဓိကအရာ။
ဤအချက်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် လုံးဝရိုးရှင်းပုံပေါက်သည့်အရာများ အမှန်တကယ် အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေလိုသောကြောင့် ဤအချက်သည် အရေးကြီးပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အစမှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဒီအချက်ကို လုံးဝ ငြင်းဆိုမယ့် အရေးပါတဲ့ ဒဿန ပညာရှင် တစ်ယောက်လည်း ရှိတယ် ဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်က ကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သံသယ မရှိပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးမှုတလျှောက်လုံးမှာ မင်းဟာ သူ့နည်းလမ်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပုံပေါ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီအံ့ဖွယ်အမှုကို ဘယ်လိုထုတ်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ ငါမမြင်နိုင်သလို အထူးသဖြင့် ငါ့ရဲ့အရင်နားလည်မှုအရ ဒါက ဥပစာအတွက် ပြင်ပသံသယဖြစ်တဲ့အခါ မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် 10% သာသံသယဖြစ်ပြီး 50% methodological သံသယမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းကို ခင်ဗျားသဘောတူတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
အမှန်စင်စစ်၊ Shabbat သည် ရှင်းပြချက်တိုင်းတွင် အလေးချိန်အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း ရှင်းပြချက်တိုင်းသည် အလေးချိန်အနည်းငယ်သာရှိသေးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်အတွက်မူ ဖြစ်နိုင်လျှင် လုံးဝရှုပ်ထွေးသွားသည်ဟု တွေးခေါ်ပညာရှင်ကို ပေါင်းစည်းထားသည့် တူညီသောဒဿနပညာရှင်ကို ရှင်းပြသည့် ရှင်းပြချက်တစ်ခုအား Shabbat က အဆိုပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ငါရှာတွေ့တဲ့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းပဲ။
ဤမေးခွန်းသည် တဖက်တွင် အစွန်းရောက်ဝါဒီများ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် အခြားတစ်ဖက်တွင် မသေချာမရေရာမှုများ ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ tatology တစ်မျိုးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပြင်ပ ပေးသွင်းသူ (PM) နှင့် အတွင်းပိုင်း ပေးသွင်းသူ (မင်း၏ ပေါင်းစပ်မှု နည်းလမ်း) အကြား ခြားနားချက်ကို ထက်မြက်စေသည်ဟု ငါထင်သော်လည်း၊
မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါ မသေချာဘူး။ ဒါကလည်း မသေချာပါဘူး။
စိတ်အနှောက်အယှက် လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
အခြေခံယူဆချက်တွေဟာ မသေချာတဲ့ ယူဆချက်တစ်ခုနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အခြေခံယူဆချက်တွေနဲ့ ပြင်ပက သံသယတွေကြားက ခြားနားချက်ကို လက်ခံပါသလား။ (ထို့နောက် သင်သည် အခြားထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို အရင်းအနှီးတစ်ခုအဖြစ် ရနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင်သံသယရှိသူအဖြစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသည်)။
မဟုတ်ရင် ယူဆချက်တွေကို တစ်ဦးချင်းစီ ရာခိုင်နှုန်းတွေမှာတောင် သံသယဖြစ်မနေဘူးဆိုရင် (မသေချာတဲ့ တူညီတဲ့ယူဆချက်ရဲ့ မပါဝင်သရွေ့တော့ ငါတကယ်နားမလည်ဘူး)။
ငါပြောသလိုမဟုတ်ရင် မင်းသံသယမ၀င်ဘူးလို့ မင်းပြောနေတဲ့ဟာကို ငါလုံးဝနားမလည်နိုင်လို့ ဒီနေရာမှာ ခြားနားချက်တချို့ရှိနေသလိုပဲ၊ ဒီအချက်လေးကို ရှင်းပြလို့ ရပါတယ်။
ဒီပြဿနာက ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာ တကယ်နားမလည်နိုင်ဘူး။ အလွန်ရိုးရှင်းပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ယူဆချက်တွေက မသေချာဘူး။ ၎င်းတို့သည် ရယ်စရာကောင်းသောကြောင့်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မှန်သလား မသေချာသောကြောင့် (အခြားရွေးချယ်စရာများ ရှိနိုင်သည်)။ ပြင်ပသံသယဆိုတာ ဘာလဲ မသိ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ယူဆချက်ထဲမှာ သံသယရှိတယ်။ ဒါပဲ။
အခု ငါရပြီလား? လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
ပြင်ပဒွိဟဖြစ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ သံသယသည် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့်နေရာမှ ဆင်းသက်လာရခြင်းဖြစ်ပြီး တွေးခေါ်မှုအတွက် ပြင်ပစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်မျိုးအဖြစ် မွေးရာပါမဟုတ်ဘဲ ဥပမာအားဖြင့် ဖြစ်ရပ်များ၏ 90% တွင်သာ မှန်ကန်သည်ဟု ဆိုထားသည့် ပရဝုဏ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် မွေးရာပါမဟုတ်ပေ။
ဒါပေမယ့် မင်းရေးပြီးတာနဲ့ "ငါ့ရဲ့ယူဆချက်တွေက ငါ့မျက်လုံးထဲမှာ မသေချာဘူး" တဲ့။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒါတွေက မှန်သလား မသေချာဘူး (အခြားရွေးချယ်စရာတွေ ရှိလို့ပါ)။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် လုံးဝအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သူဟု ထင်ရပြီး အကယ်၍ သင်သည် ၎င်းကို ဆက်လက်စွန့်ပစ်နိုင်သည်-
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ “သတိပေးသူ” ရှိတယ် ဆိုတာကို ရည်ညွန်းပြီး သူတို့ ရဲ့ အပြင်ပန်းက ယူဆချက်တွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- အဝေးက စိတ်ကူးတွေကို ကြည့်တဲ့ စိတ်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုံဥပမာမှာ ဒါကို နားလည်နိုင်တယ်။
သို့ သော် အကယ်၍ သင်သည် (= မျက်လုံးများ ?) ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံရပါမည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့၏ တိကျမှုအဆင့်ကို လုံးလုံးလျားလျား မရရှိဘဲ ပြီးပြည့်စုံသော အခြေခံ ယူဆချက်များကို ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိမှု အကြောင်းကို အပြည့်အဝ သေချာစွာ ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံရပါမည်။ သူတို့မှာ တိကျသေချာတဲ့ အဆင့်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သေချာလက်ခံပါတယ်။ပြီးတော့ စိတ်ကူးရဲ့ အကွာအဝေး၊ ထို့ကြောင့် ထိုအဆင့်သို့ရောက်ရန် ၎င်းတို့တွင် မမှန်ကန်မှုများပင် ဤဝုဏ်အတွင်းတွင် မွေးရာပါရှိသည်ကို သင်သံသယမရှိပါ။
သို့သော် သင်သည် ၎င်းတို့အပေါ် အဆိုးမြင်သောသံသယကို ထပ်လောင်းထည့်လျှင်၊
၁။ထိုအခါ၌ သင်သည် ယုံမှားခြင်းသံသရာမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ 1. ထောက်ပံ့ရန် စာရင်းအင်း ပမာဏသည် 2% သာဟု ယူဆကာ 10% ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရန် အကြောင်းပြချက် မရှိပါ။ ဤသည်မှာ လုံးဝသံသယဖြစ်မှုဖြစ်နေပြီ 50။ ၎င်းသည် သင်၏ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်အမှန်တရားများ၏ မှန်ကန်မှုဖြစ်နိုင်ခြေ၏ များပြားမှုအပေါ်တွင် အကျုံးဝင်ကြောင်း နောက်ဆုံးတွင် သင်လက်ခံနိုင်လိမ့်မည်ဟူသော သံသယ၏သံသရာဆီသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်သည်။ 3. အပျက်သဘောဆောင်သောသံသယများကိုချခြင်း၏နိယာမကိုလည်းသင်မေးခွန်းထုတ်နိုင်သည်။
Nachion မှာ ယောနသန် ရှာလုံ ဂရန် ကွယ်လွန်သူ ပရော်ဖက်ဆာ David Halvani Weiss ကွယ်လွန်ခြင်း (ကော်လံ ၄၈၅)၊
Yisha ဂရန် လေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းအတွက် အဖြေ
J ဂရန် Lehavah သည် လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလား။ (၄၈၄)၊